Maxaa dadka da'da ah ee Japan ku kallifa xatooyada? - BBC News Somali
Maxaa dadka da'da ah ee Japan ku kallifa xatooyada?
Lahaanshaha sawirka YO NAGAYA
Image caption Haweenay da' ah oo xabisga ku jirta
Bishii hore ayaa BBC-du waxay tebisay warbixin tibaaxaysay korodhka tirada dadka waaweyn ee dalka Japan ee la xidho. Waxaana ugu badan dumarka da'da ah. Haweenay 68 jir ah oo markii shanaad la xidhay ayaa waxay haatan xabsiga ugu jirtaa khudrad ay xadday.
Haweenaydaas ayaa BBC-da uga warantay xadhigeeda ayaa sheekadan u marisay:
Waxa markii u horraysay la i xidhay aniga oo 53 jir ah. Waxaan u malaynayaa berigaa boorso ayaan xaday. Waxaana la igu xukumay laba sanadood oo xadhig ah. Mar kasta dukaamada ma xado laakiin waxan wax xadaa marka aan ka fursan waayo. Markii ugu horraysay ee aan wax xaday waxa igu kallifay culays qoys oo i saarraa. Caruurtayda midkood ayaa dugsi inuu dhigto diiday oo anna waan cadhaysnaa.
Japan: Waayeel banaanka ka doorbiday xabsiga
Wasiirka amniga kombiyuutarrada Japan oon waligii kombiyuutar isticmaalin
Mar kale ayaa hadana waxa igu dirqiday haweenay xabsiga ku jirtay oo igu tidhi waan sheegi doonaa inaad dambiile qorantahay hadii aad tukaan ii soo xadi weydo. Waxaan u malaynayaa in ay cinwaanka gurigayga ka aragtay waraaqihii la iigu soo dirayey xabsiga. Maan doonayn inay falal dambiyeed kaygii hore cidna u sheegto, sidaa awgeed ayaan wax ugu soo xaday.
Imikana tukaan baan khudrad ka xaday, sababtuna waxa weeyi macaan baan leeyahay hadna waxa macaan ayaan jecelahay. Waan iska celin waayey oo waxaan xaday canab aanan lacag aan siisto haysan.
Waxa kale oo jira cadaadis i saaran oo ah in inan aan dhalay uu guriga nagula noolyahay isaga iyo ilmo uu dhalay oo naagtiisiina furay, welina bilaa camal ah. Maalin aanu isku xanaaqnay oo murannay ayaan tukaan xaday. Waa wax xun. Markasta waa iska bilaa camal oo waxba ma haysto aniguna waxaan ku idhi guringan loogama baahna qof caajisa.
Odaygaygu jeelka wuu igu soo booqday laakiin inantaydu way cadhaysantahay oo way diidday inay ii timaad.
Dad badan baa jeelkan ku jira oo dambiyo galay sababtuna waxa weeyi caruurtoodii oo aanay is fahmayn. Way cidloonayaan, caruurtoodiina noloshooday ku jiraan oo wakhti ay ku daryeelaan ba uma helaan waalidkooda.
Ma doonayo inaan mar dambe wax xado, waxaan doonayaa inaan ka adkaysto oo aanan cid dambe oo igu khasabta u debcin, waxaanan sidoo kale isku dayi doonaan inaan iska yareeyo waxyaabaha macmacaan. Run ahaantii ma doonayo inaan halkan ku soo noqdo, qof weyn baan ahay oo halkan kuma noolaan karo.
Odaygaygu wuxu yidhaahdaa wixii dhacay, dhace oo wuxu sheegaa inuu ka xun yahay in aanu xaaladayda fahmin. Wuu dhaawacmay intaan xidhnaa markaa waxaan doonayaa inaan daryeelo markaan halkan ka baxo. Da'yarta Japan duruufo adag bay ku jiraan laakiin waxan rajaynayaa in ay waalidiintooda daryeelaan oo aanay cidlaynin.
Junko Ageno, haweenay ka tirsan ciidanka asluubta xabsiga Tochigi
Image caption Junko Ageno
Waxaan askari ilaalada xabsiyada ah noqday labaatan sano ka hor. Shan sano ka hor mar aan fasax ka soo noqday, ayaa waxaan dareemay tirada dadka da'da ah ee xabsiga la keenayo oo korodhay. Waxa jiray xataa dhawr maxbuus oo aan garan waayey oo cusbaa.
Maxaabiis badan waxa loo soo xidhay tukaamo ay xadeen, sababtuna ma aha in aanay wax ay cunaan haysane waxay doonayeen in aanay lacagi ka bixin sababtoo ah cuntada tukaamada taalla aayar baa la qaadan karaa. Waxaan akhriyaa xogta maxaabiista marka la keeno jeelka, badankooduna waxay xadeen in yar oo bariis ah iyo dhawr walxood oo kale oo cunto ah oo qiimahoodu tahay 1000 yen (u dhiganta 7 Giniga Sterling)
Dabcan maxaabiista qaarkood baan shaqynin laakiin fikradda aan ka qaatay warbixinahooda shakhsiga ah waxa weeyi in lacag ay wax ku iibsadaan haysteen laakiin ay door bideen inay xadaan oo aan lagu qaban karayn.
Waan la hadlay oo way ogyihiin waxay sameeyeen in ay khalad tahay laakiin waxay ku odhanayaan " qof da'a baan ahay lacag badanna ma haysto markaa waxaan ka welwelsanahay ba noloshayda iyo gobowga"
Waxaan masuul ka ahay goobtan lagu hayo dadka dambiyada ku noqnoqda, qoysaskoodaa dayriyey. Waa dad go'doona oo cidloonaya. Xabisga waxay ka helaan cunto, hu' iyo hoy. Waxaana dhici kartaba in ay saaxiibo ka helaan halkan. Waxay dareemaan in ay xabsiga ku nabad gelayaan oon bulshadu uba damqan.
Si markaa xabsiga loo dhigo sida ugu fudud ee u suurto gelin kartaa waa inay xatooyo sameeyaan, waana sababta ay u korodhay tirada dadka da'da ah ee fal dambiyeedyadaa ku kacaa.
Waxaan madax ka ahaan jiray goob ay ka shaqeeyaan dadka lagu soo xidho xatooyada markii ugu horraysay. Dumarkii aan goobtaa kula kulmay qaarkood ayaa waxay imika noqdeen kuwo fal dambiyeedyada ku noqnoqda oo ku jira qayb kale. Waxaan weydiiyey sababta ay xabsiga dhakhsaha ugu soo noqdeen, waxaanay mid waliba iigu jawaabtay "waan cidlooday".
Markay jeelka ka baxayaan waxay sheegaan in aanay mar dambe ku soo noqon doonin xabsiga, laakiin maadaama oo fal damiyeedyo faylkooda loo geliyey oo ay lixdan jirna kor u dhaafeen oo aanay ehel iyo asxaab daryeesha lahayn oo ay ka cabsi qabaan nolosha cidlada ah wax bay xadaan si loogu soo celiyo jeelka. Aad baan uga damqadaa dadka da'da ah ee xabsiyada ku soo badanaya.
Marka maxaabiista la sii daayo, waxay la shaqeeyaan waaxda daryeelka bulshada ee degmooyinka ay ku noolyihiin. Waxaan haatan doonaynaa in ay aragtidooda badalaan oo aanay u arag in xabsiga oo ay galaan tahay sida keliya ee ay daryeel ku helayaan.